ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၈ မိနစ်	ဆောင်းပါး
(ဆောင်းပါး) တောင်မရောက် မြောက်မရောက်၊ ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ ဗိုလ်သခင်ဆရာ၊ စုံစီနဖာ စွယ်စုံကျော်ထင် ကျွန်ုပ် ဆြာမင်းဒင်ကား၊ ဤရက်ပိုင်းအတွင်း အကြီးအကျယ် စိတ်လေလျက်ရှိချေ၏။ လေရခြင်းအကြောင်းရင်းတွင် ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ အတ္တအရေး တစေ့ တရွေးသား ...
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၁ နာရီ ၀၀ မိနစ်	ဆောင်းပါး
လူ့လောကမှာ အခွင့်အရေးဆိုတာ အကြိမ်ကြိမ် မရပါဘူး။ ဒေါ်စုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမှုကိစ္စဟာ လူအများကို စုစည်းပေးနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စုကို ကျားကန်ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေရော၊ ထောက်ခံနေပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေရော၊ ကိုယ့်တာဝန်ဟာ ဘာလဲ ...
လွတ်လပ်သည့် တရားစီရင်ရေးကို တိုင်းတာသည့် စံနှုန်းများ
တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၀၅ မိနစ်	ဆောင်းပါး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကန့်သတ်တားဆီးမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်သည့်အတွက် စွဲဆိုထားသည့် ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂/ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁ဝ၉ တို့အရ စွဲဆို ...
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ ...” အပိုင်း (၈)
စနေနေ့၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၄၁ မိနစ်	ဆောင်းပါး
ဆရာပါရဂူ၊ မောင်ကိုယု၊ တင်ဆွေမိုးနှင့် ကဗျာဆရာ ကိုခေးတို့ ရောက်၍လာကြသည်။ ဆရာပါရဂူနှင့်မောင်ကိုယုတို့က Signature Campaign ကိစ္စအားရှင်းပြသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ …" အပိုင်း (၇)
စနေနေ့၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၃၄ မိနစ်	ဆောင်းပါး
“စစ်ကားတွေဟာ ရန်ကုန်တဝိုက်က လူသေတွေရော၊ ဒဏ်ရာရသူတွေကိုပါ သယ်ယူလာပြီး ဆေးရုံကြီးမှာ ပစ်ချလိုက်သည်။ တချို့ကျောင်းသားလေးတွေဆိုရင် ခြေတွေ၊ လက်တွေမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာ၊...
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ ...” အပိုင်း (၆)
သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၂၀ မိနစ်	ဆောင်းပါး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖခင်အောင်ဆန်း၏ အတ္ထုပတ္တိစာအုပ်အား ရေးသားပြုစုရန် စိတ်ထက်သန်လျက်ရှိသည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ် ရန်ကုန်သို့ ရောက်စဉ်ကလည်း …. နေ့စဉ်လိုလိုပင် တပ်မတော်မော်ကွန်းတိုက်သို့သွားပြီး ဂျပန်ခေတ် Statement များအား လက်ရေးနှင့် ကူးယူခဲ့၏။ ပြင်ဆင်ခဲ့၏။ ...
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ ...” အပိုင်း (၅)
သောကြာနေ့၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၄၃ မိနစ်	ဆောင်းပါး
၁၉၇၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ်နှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုက်၏။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ်၏ အိမ်ထောင်ရေးက …..“သဘောတူညီမှု” တခုနှင့် ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လက်ထပ်ခွင့်၊ ...
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ ...” အပိုင်း (၄)
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၂၈ မိနစ်	ဆောင်းပါး
၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် ဟူးခ်ျကောလိပ်မှ ဒဿနိကဗေဒ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ဖံ၊ စီးပွားရေး ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်တို့နှင့် ဝိဇ္ဇာ (ဂုဏ်ထူး) ဘွဲ့ ရရှိခဲ့၏။ ထိုစဉ်က…. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက်သည် ၂၂ နှစ် ရှိပြီ။ ဘွဲ့ရပြီးနောက်….. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ...
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ ...” အပိုင်း (၃)
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၂ မိနစ်	ဆောင်းပါး
၁၉၆ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးနုက ပြည်ထောင်စုပါတီထောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်သည်။ “ဆွေ၊ ငြိမ်း” တို့ကမူ ဖဆပလအနေနှင့်ပင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ကြ၏။ “ဆွေ၊ ငြိမ်း” တို့၏ ကြွေးကြော်သံက ….“ရှုံးရင်လည်း နိုင်ရမည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကား ...
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ ...” အပိုင်း (၂)
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ ၁၈ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၂၃ မိနစ်	ဆောင်းပါး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနှင့် သူမ၏ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရသည့်ကာလက …. တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းလေးသာဖြစ်သည်။ တိတိပပတွက်စစ်ပါမူ ….. စုစုပေါင်း ၂၅ လမျှသာ….။ ဤမျှတိုတောင်းသော အချိန်လေးများကိုပင် ပြည့်ပြည့်ဝဝ အတူနေခဲ့ကြရ ...
စာမျက်နှာ 68 စုစုပေါင်း 70